अरूकोसँग भन्दा पनि आफ्नै फिल्मसँग... :: अशेष अधिकारी :: Setopati
अशेष अधिकारी काठमाडौं, असोज १८
सर्वाधिक ‘टिआरपी‘ हुँदाहुँदै पनि विज्ञापन एजेन्सीको बदमासीले ‘तीतो-सत्य’को टेलिभिजनबाट बहिर्गमन भयो। टिभीको बहिर्गमनपछि दीपाश्री निरौला र दीपकराज गिरीको समूह ‘६ एकान ६’ बनाउँदै फिल्म निर्माणमा होमियो। फिल्मलाई दर्शकले ठिकठाकै मन पराए।
दोस्रो फिल्म ‘वडा नम्बर ६’ले दर्शकको नजरमा उनीहरू परे। नाफाकै व्यापार गर्न सफल भयो। तेस्रो फिल्म ‘छक्कापञ्जा’ २०७३ साल भदौ २४ गते रिलिज भयो। करिब ६० जना कलाकारको सन्तुलन मिलाउँदै बनाइएको फिल्मले नेपाली बक्स अफिसमा नयाँ मानक कायम गर्‍यो र नेपाली फिल्मका लागि बजारको आयतन बढाउने काम गर्‍यो।
दीपाश्री निरौलाको निर्देशकीय डेब्यू सिनेमाले उनलाई निर्देशकको परिचयमा गतिलो आयाम थपिदियो। उनै निरौलाको निर्देशन यात्रा फिल्मको तेस्रो शृंखलासम्म आइपुगेको छ। सिक्वलको संख्यासँगै फिल्ममाथि अनेक टिपा-टिप्पणी पनि सुरू भएका छन्। तेस्रो श्रृखंला घटस्थापनादेखि रिलिज हुँदैछ।
फिल्म रिलिजको सेरोफेरोमा निर्देशक निरौलाले ‘कन्टेन्ट’ र प्रस्तुतिमाथि उठेका विवाद र सोको बारेमा सेतोपाटीका अशेष अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अशंः
कस्तो बन्यो ‘छक्कापञ्जा’?
राम्रो बनाउने कोसिस गरेका छौं। बाँकी कुरा दर्शकको नजरमा कस्तो देखिन्छ, मुख्य कुरा त्यो हो। तर, विषय उठान चाहिँ गहकिलो गरेका छौं।
तपाईंको स्वमूल्यांकनले के भन्छ?
त्यो हिसाबबाट भन्दा मैले तीन सय प्रतिशत काम गरेको छु।
पछिल्ला शृंखलालाई क्रमबद्ध गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ?
कन्टेन्ट र कमेडीको मिक्स भएको हुनाले यो तेस्रो शृंखलालाई म एक नम्बरमा राख्छु। मलाई यसबाट धेरै नै आशा छ। बाँकी दुईटालाई जसरी मिलाएर राखे पनि हुन्छ।
यसपटकको विषय यही नै हुनेछ भनेर निर्णय कसरी गर्नुभयो?
हामी मासमा काम गर्ने मान्छे हौं, त्यसकारणले गर्दा मासलाई के कुरा चाहिँ बिझिरहेको छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान हुन्छ। फिल्म बनाउँदा दर्शकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर फिल्म बनाउने भएको हुनाले उहाँहरू बस्ने समाजमा के कुराले जरो गाडेको छ, त्यसलाई धेरै नै हेर्छौं।
पहिला पनि वैदेशिक रोजगारलाई हेरेका थियौं। अहिले चाहिँ शिक्षा प्रणाली हाम्रो नजरमा पर्‍यो। शिक्षा देशको महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले, यो विषयलाई हामीले छान्यौं किनकि पूरा नेपाली समाज योसँग गाँसिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विषय आजको आवश्यकतामा पर्छ।
स्क्रिप्ट तयार गर्न कति समय लाग्यो?
दीपकजीलाई स्क्रिप्ट लेख्न छ महिना लाग्यो। त्यसपछि सुटिङ पनि ७०-७५ दिन लाग्यो। इडिटिङ टेबलसम्म पनि उही रफ्तारको काम गरिरहेका छौं। सेन्सरमा गएपछि अलि सास फेर्न पाइएला। कोसिस गरेर दर्शकले पत्याएपछि त्यसलाई कायम गर्ने ठूलो चुनौतीका बीच हामी छौं। हामी त्यसैलाई सम्बोधन गर्छौं। फेरि फिल्म बनाउने काम भनेको जति गर्दै गयो उति नै सिकेर नसकिने अनुभव मलाई भइरहेको छ।
स्क्रिप्ट कुनै वास्तविक घटनाबाट उत्प्रेरित छ कि छैन?
छ। किनकि मानिसका जीवनमा आइपर्ने, पर्नसक्ने घटनालाई ध्यान दिएका छौं र समाजमा अहिले के कुरा व्याप्त छ भन्ने कुरालाई हेर्दा यसलाई वास्तविक मान्नुपर्छ।
निर्देशकका रूपमा पहिलो फिल्म सफल हुँदाको खुसी अनि दोस्रोमा पनि सफलता हात पर्दाको अनुभवले गर्दा तेस्रो सिनेमा आइपुग्दा यस सिनेमा त्यो प्राप्त सफलताको दबाब कतिको अनुभव भइरहेको छ?
दबाबभन्दा पनि जिम्मेवारी महसुस गरेकी छु। पहिलो फिल्म ‘ल दीपाले गर्छे’ भनेर निर्देशनको कमाण्ड सुम्पिदिए। तीतो-सत्यमा त निर्देशन गर्दै आइरहेकी थिएँ, फिल्मको पनि जिम्मेवारी आयो। मलाई त्यही त होला नि भनेर काम गरियो, जब फिल्मको सफलताबाट वाहीवाही पाएँ तब मलाई डर लाग्यो।
फिल्मले यति धेरै कीर्तिमान तोड्यो, मलाई अब मेरो दोस्रो फिल्म कस्तो होला भन्ने भयो। दोस्रोमा पनि त्यस्तै भयो। तेस्रोसम्म आउँदा त्यसलाई कायम गर्ने डर छ, मैले गरेको टिमले गरेको काम भनेर म ढुक्क भएर बसेकी छैन्। वास्तवमा अहिले मुश्किलले ४ घण्टा पनि सुत्न पाइरहेको छैन।
अहिले अरूको फिल्मसँग भन्दा पनि आफ्नो फिल्मसँग आफैंलाई डर लाग्ने भइरहेको छ। आफ्ना फिल्मकै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन अझ राम्रो काम गर्न पर्नेछ। यसलाई चुनौती मानिरहेकी छु।
तपाईंका दुई फिल्मलाई महिला निर्देशकले बनाएको फिल्ममा महिलालाई नै गिज्यायो भन्ने आरोप पनि लागेको छ, के साँच्चै तपाईंले त्यस्तो गर्नुभएको हो?
ती आरोपहरू मिथ्या हुन्। पहिलो ‘छक्कापञ्जा’का कुरा गर्नुहुन्छ भने कुरेर बस्ने विष्णु पात्रको कुरा कसैले गरेनन्, खाली वर्षाले निर्वाह गरेको पात्रलाई उछालियो। प्रियंकाले गरेको भूमिकालाई पनि बिर्सियो जसले थप्पड हान्छु भन्ने अर्कामाथि व्यभिचारको मनसाय राख्ने पुरूष पात्रलाई ठीक पारिदिई, त्यसको चर्चा गरिएन? त्यहाँ दुईटा नारीको कुरा गरिएन तर एउटा पात्रलाई लिएर धेरै आलोचना गरियो। भएको त्यही हो।
म पुरूष र महिला बराबर हिँड्न सक्ने हुन भन्ने मान्यता राख्छु। पुरूषलाई गाली गर्नेमा म पर्दिन्। पुरूष हुन की महिला ती राम्रा-नराम्रा दुबै चरित्रका हुन्। दुबै पात्रमा स्टेरियोटाइप चरित्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। समाजमा पनि त्यही छ। रियालिस्टिक, रियालिस्टिक भनेर कराइरहने तर समाजमा भएका देखिएका कुरा गर्दा आलोचना? म समाज हेरेर फिल्म बनाउँछु जेन्डर हेर्दिनँ, यदि त्यसो हो भने त मैले महिला नै महिला राखेर फिल्म बनाउनुपर्‍यो। पुरूष त राख्नै भएन।
त्यसरी सोच्नै हुँदैन, समाजमा जे-जस्तो हुन्छ त्यही कुरालाई देखाउने हो, कुने पात्रलाई लिएर ‘जेनेरललाइज’ गर्न हुँदैन। फिल्म कल्पनाको सागर हो त्यहीमा रहेर फिल्म बनाउने हो।
यी आलोचनाहरूले गर्दा यसपटक विवाद होला कि भनेर चनाखो हुनुभयो कि भएन?
पहिले पनि कसैलाई होच्याउने, खिल्ली उडाउने भन्ने मनसाय हाम्रो होइन। कसैलाई दबाएर वा तल देखाएर मलाई केही हासिल गर्नु छैन, यो फिल्डमा बाँच्नु छैन। मैले दोस्रो सिनेमामा वकिल महिलालाई देखाएँ, स्वतन्त्र छोडिदिने नाममा छोराछोरीले हिँडेको बाटो ठिक-बेठिक के छ अभिभावकले हेर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छु। त्यसलाई हेक्का राखिएन।
अब आरोपै लगाउन लाग्नुहुन्छ भने त मलाई केही भन्नु छैन। यसले म झन् सजग हुन्छु।
आफ्नो फिल्मलाई १० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ?
१० मा १० दिन्छु। यसपालि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जोक्सहरू मात्र देखाउँछन् भन्ने जस्ता आरोपहरू पहिले थिए, त्यो आरोपलाई अलिकति भने पनि हटाउन सक्छु भन्ने विश्वास छ। अहिले फिल्म बनिसकेको छ, मलाई यतिको फिल्म बनाउने हो भने हाम्रो नेपाली सिनेमा राम्रो ठाउँमा लाग्छ भन्ने भएको छ।
तेस्रो फिल्मसम्म आइपुग्दा निर्देशकका रूपमा तपाईंमा कस्ता परिवर्तनहरू आएका छन्?
पहिले काम गर्दा अलिकति इस्यू छुने तर धेरै नचलाउने गर्थ्यौं। तीनसम्म आएपुग्दा मेरो फिल्ममा कमेडीको मात्र हालीमुहाली गराएकी छैन, इस्युमा कमेडी हालेका छौं, अलिकति ‘टर्न एण्ड ट्वीस्ट’हरू छन्। काम सिक्दैछु, अझै सिक्न बाँकी छ बन्ने छ।
‘छक्कापञ्जा-३’ सम्म आइपुगिसकियो अब दीपाश्रीलाई यो भन्दा भिन्न जनराको फिल्मको निर्देशकका रूपमा हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पहिले एउटा अर्कै फिल्मबाट निर्देशन डेब्यू गर्ने कुरा थियो?
यो फिल्मपछि अर्को कुनै फरक विषयमा फिल्म बनाउने बारेमा सोचिरहेकी छु। हामी कमेडी जनारामा काम गर्ने भएकाले सेन्टिमेन्टल जनरामा काम गर्न अलि गाह्रो त हुन्छ। तर मेरो मनमा छ। यसपछि ‘छक्कापञ्जा-४’ चाहिँ बन्दैन, अर्कै सिनेमा बन्छ तर नाम चाँहि ‘छ’ बाट नै आउँछ।
नाम मात्र परिवर्तन हुन्छ कि नयाँ चिज देख्न पाइन्छ?
फरक देख्न पाउनुहुन्छ।
त्यो पनि दसैंमा नै आउँछ कि?
हैन, दसैंमा आउँदैन। अर्को फरक मितिमा आउँछ।
अघिल्लो वर्ष तपाईंले हरेक वर्ष ‘छक्कापञ्जा’को सिरिज बनाउने र अर्को फरक कथामा फिल्म बनाउने बताउनु भएको थियो, त्यो योजना के भयो?
अहिले पनि दुर्इ-चार वटा स्क्रिप्टमा काम भइरहेको छ। फिल्म बनाउने काम चानचुने होइन। वर्षको एउटा फिल्म निकाल्न त गाह्रो छ। अर्को फिल्म हामी कोहीसँग संयुक्त रूपमा निर्माण गर्छौं।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १८, २०७५, ०४:५३:००